Pls help my Gmail Incomming problem! - MYSTERY ZILLION
Pls help my Gmail Incomming problem!
ကျွန်တော့် ရဲ့Gmail မှာ အ၀င် mail အားလုံးဟာ Inbox ကိုမရောက်ပဲ အားလုံး Trash ထဲကိုပဲရောက်နေလို့ဘယ်လို ပြန်ပြီး Inbox ထဲကို ရောက်အောင် ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ ဆိုတာ MZ မှ သူငယ်ချင်းတို ့ကူညီဲကြပါဦးဗျာ ...။ ကျွန်တော်လည်းဘယ်လို မှစဉ်းစားလို ့မရလို ့ပါ။
Help me ! ( ( (
Setting ထဲက Filter လေးတချက် ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအုန်းဗျာ
Filter လည်းလုပ်မထားဘူး ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို ဖြစ်သွားတာကို စဉ်းစားနေတာ....
သားတော့ မသိဘူး။ Gmail Team ကို အကြောင်းကြားပါလားဗျ။
Please check ... Setting ... Forwarding and POP/IMAP ... Forwarding ( or ) POP Download ...
Change setting to " keep Gmail's copy in the inbox "
အင်း ကျွန်တော် သတိမထားလိုက်လို့Computer ပြောမှပြန်ကြည် ့မိလိုက်တာ mail ထဲက delete လုပ်ထားသမျှတွေကို Recovery
သဘောမျိုးနဲ့Forwarding and POP/IMAP မှာ Delete Gmail's Copy ကို ရွေးထားမိခဲ ့တယ် အဲဒါကြောင် ့ဖြစ်မယ် အခု Computer ပြောသလို ပြောင်းလိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ကျေးဇူးပါ။